Vamwe Vashandi veKanzuru yeHarare Voramwa Mabasa
Ndira 13, 2014
Vashandi vekanzuru vanoti vave nemazuva vasati vatambirisiwa mari dzavo
WASHINGTON DC — Vashandi vekanzuru yeguta reHarare mubazi remvura vanonzi varamwa mabasa neMuvhuro vachinyunyuta nekunonoka kwavo kuwaniswa mari dzavo dzemihoro pamwe nemashandiro akanaka.
Vashandi ava vanonzi vaswera vari pamuzinda wekanzuru iyi paTown House muHarare, panguva iyo vamiriri vavo vanonzi vanga vari mumisangano nevakuru vekanzuru.
Mumwe mushandi wekanzuru asina kuda kudomwa zita rake sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau anoti vamwe vashandi vave nemwedzi inodarika miviri vasati vapihwa mari dzavo dzemihoro.
Meya weguta reHarare, VaBernard Manyenyeni, vanoti vanoshushikana zvikuru nedambudziko ravakatarisana naro. Asi vanoti chikonzero chiri kuita kuti kanzuru yavo itadze kubhadhara vashandi inyaya yekuti haisi kuwanawo mari yakawanda kubva kuvagari.
VaManyenyeni vari kukurudzira vagari nevose vanofanirwa kunge vachibhadhara mitero kukanzuru yavo kuti kana vachida kuti basa rifambiswe zvakanaka, uye vashandi vabhadharwe paine nguva, vabhadharewo mitero paine nguva.
Zvichakadaro, vagari veguta reBulawayo vanoti vari kufara zvikuru nedanho ratorwa nekanzuru yavo rekuderedza mazuva ainovavharira mvura kubva pamazuva maviri kuenda pazuva rimwe pasvondo.
Meya weguta reBulawayo, VaMartin Moyo, vakaudza vatori venhau svondo rapera kuti kutanga neMuvhuro kanzuru yavo inenge yonyevenutsa mapirwo ari kuitwa mvura kuvagari, pachitariswa mvura iri kupindawo mumadhamu anopa mvura kunzuru yavo.
Guta reBulawayo ranga richivharira vagari mvura kwemazuva maviri pasvondo richiti mvura yainge ichipinda mumadhamu anoripa mvura yaive shoma.
Sachigaro werimwe sangano rinomirira vagari, reBulawayo Progressive Residents Association, VaEdias Shumba, vanoti nhengo dzavo dzatambira danho iri nemufaro mukuru.
Asi VaShumba vanoti vanokurudzira vagari kuti varambe vachitora matanho ekuchengetedza mvura kuitira kuti kanzuru yavo ikwanisewo kuderedza zvakare nguva iri kuvharwa mvura.